Mofomamy spaonjy karaoty sy yaorta | ThermoRecipes
fitsangatsanganana60 minitraOlona 8330 kaloria
Izahay dia efa eto miaraka amin'ny iray hafa mofomamy tsotra, amin'ireo izay voaomana ao anatin'ny minitra vitsy ary mety tsara amin'ny sakafo maraina, ho an'ny sakafo kely na entina any am-pianarana toy ny sakafo atoandro.
entana karaoty (izay ao amin'ny Thermomix dia voakiky vetivety) ary koa yaourt. Ny almond dia mandeha eo amboniny fotsiny, ka raha tsy manana ianao na tsy tianao be dia be dia aza apetraka ary dia izay.
Latsaka be ranony ary manana tsiro manankarena be io. Mazava ho azy, raha vao mangatsiaka dia tazomy ao anaty vata fampangatsiahana, izay toerana tsara indrindra hanaovana mofomamy sy mofomamy. voatavo.
1 Mofo karaoty sy yaorta
Mofomamy tena mora hatao ary mahasalama sy manankarena be.
Ho an'ny kapoakan'ny mofomamy:
Karaoty 250 g (lanja voadinika indray mandeha)
150 g siramamy volontany
150 g ny yaorta tsotra tsy mamy
Menaka tanamasoandro 70 g
250 g ny lafarinina
Katsaka katsaka 70 g
Valopy 1 misy masirasira karazana Royal (16g)
Ho an'ny ivelany:
1-2 sotro ny siramamy volontany
Amandy 20 (eo ho eo) amin'ny sombin-javatra
Napetrakay tao anaty vera ilay karaoty ary voakolokolo. Nofohanay tamin'ny alàlan'ny programa 10 segondra, hafainganam-pandeha 10. Navoakantsika io karoty io efa nototoina ary notehirizinay.
Tsy manasa ny vera isika dia mampiditra azy ao anaty lolo. Ampianay ny atody ary koa ny siramamy. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, hafainganam-pandeha 3 1/2.
Ampio ny yaourt sy menaka. Izahay dia manao fandaharana 6 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Ampio izao ny karaoty sy ny programa 4 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Esorinay ny lolo. Ampio ny lafarinina, ny vovo-katsaka ary ny masirasira. Mifangaro amin'ny fandaharana izahay 10 segondra, hafainganam-pandeha 3. Vao nifangaro tamin'ny spatula izahay.
Manamboatra lasitra 22 santimetatra ny savaivony misy menaka na dibera kely ary lafarinina kely, na borosio aminy ity fangaro ity.
Arotsakay ao anaty lasitra ilay fangaro. Mamafy siramamy kely amin'ny tany isika. Ary koa ny amygdala voatetika.
Mofomamy amin'ny 180º mandritra ny 50 minitra. Aorian'ny 40 minitra voalohany, raha hitantsika fa tena volamena be io, dia fonosintsika amin'ny alim-by aluminium ary tohizantsika amin'ny fandrahoana sakafo.
Notetehiko tamin'ny antsy ny amandy, saingy afaka notetehina tao amin'ny Thermomix izy ireo, alohan'ny hamonoana ny karaoty. Kapoka turbo roa dia ho ampy.ç Azonao soloina yaourt soja ho an'ny yaourt voajanahary hahazoana mofomamy spaonjy tsy misy lactose.
Fanazavana fanampiny - Mofo sponjy voatavo roa loko, Tsy miraikitra amin'ny bobongolo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Fivarotana mofomamy » Mofo karaoty sy yaorta
Stefan zweig dia hoy izy:
Ho an'ny tsiriko dia tsy ampy siramamy izy ary manana lafarinina betsaka.
Valiny tamin'i Stefan Zweig
Ekeko fa tsy tiako ireo mofomamy mamy loatra, mba hahatonga azy ireo ho salama kely sy tsy ho be kaloria. Saingy azonao atao ny manampy siramamy bebe kokoa tsy misy olana.
Tsy haiko izay havaliko anao momba ny lafarinina be ... Ataoko fa mety ilay izy, fa tsy haiko ny milaza azy aminao.
Mofomamy Panna Cotta misy mandarin